Ukwazi | Martech Zone
NgeSonto, ngoJulayi 22, i-2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izolo benginomhlangano omnandi nomphathi wendawo wenkampani. Ngokushesha uba ngumeluleki nomngane. UngumKristu futhi ozinikele. Nami ngingumKristu… kodwa ngaphambi kokuchofoza lapha, ngicela ungichazele. Ngiyakholelwa kuJesu futhi ngimsebenzisa njengomeluleki wendlela engibaphatha ngayo abanye. Ngama-39, angizange ngenze umsebenzi omkhulu kakhulu kulokhu kepha ngiyazama ukuthuthuka. Nakhu lapho ngilwa khona:
Ngikuthola kunzima ukufinyelela kubantu abaqonde. Njengoba ngikhula empilweni, mina ufuna ukuvula izingalo zami ukusho abantu - kepha ngincamela ukungabaniki nesikhathi sosuku. Enkampanini enepolitiki (ingabe leyo nkampani yonke?), Angidlali kahle nabanye. Angimane ngidlale. Ngiyawuzonda umdlalo - ngifuna ukwenza nje umsebenzi. Ngiyakuzonda nokudlalwa. Akukho okungithukuthelisa kakhulu.
Ngilwa nobunzima obanele. Ngiqasha ngoba angifuni ukuba nekhaya. Ngishayela imoto enhle. Angithengi amathoyizi amaningi. Ngokuqhathaniswa nomhlaba wonke, ngicebile. Uma kuqhathaniswa ne-United States, ngisezingeni eliphakathi nendawo, mhlawumbe ngingaphansi kancane. Ngabe kulungile ukunethezeka uma abanye emhlabeni bengekho? Ungakhululeka kanjani? Kuyisono yini ukuba yisicebi? Angazi.
Ngabe kufanele ngiphikisane nempi noma ngabe lokho kusho ukuthi abantu bazohlala kubushiqela obucindezelayo? Ngabe kufanele ngikhathazeke kuphela ngezwe lami namasosha ethu? Ingabe kungumKristu 'ukunaka izindaba zakho' lapho abanye behlupheka? Uma ubona umuntu ezama ukubulala omunye umuntu futhi inketho yakho yokumvimba ngukumbulala - ngabe ngumKristu lowo? Imiyalo Eyishumi ithi akufanele sibulale - okuvamile ngobuJuda, ubuKristu, kanye nobuSulumane.
Ukuze ube ngumKristu omkhulu, yindlela ophila ngayo impilo yakho, ubuhlobo bakho noNkulunkulu, noma ulichaza kanjani iBhayibheli? Ngifunde izincwadi ezimbalwa ezimnandi ngokuhunyushwa kweBhayibheli ezinikeza ubufakazi obuphelele bokuthi amaphutha enziwe ekuhumusheni. Amanye amaKrestu angathi ngiyahlambalaza ngisho nokusho lokho. Ngicabanga nje ukuthi kukhukhumele ngathi ukukholelwa ukuthi ekuhumusheni okusuka ku-Aramaic, kuya esiGrekini, kuya esiLatin (kabili), kuya ku-Queen's English, kuya ku-Modern English ukuthi asilahlekelwanga okuthile ekuhumusheni. Akukhona ukuthi angilihloniphi iZwi, kodwa nje ukuthi ngilisebenzisa njengesiqondisi hhayi isethi yezikhombisi-ndlela.
Ngithanda ukuhleka. Angithandi ukuhleka 'abantu', kepha ngiyakuthanda ukuhleka 'ngabantu'. Ngingumuntu okhuluphele futhi ngithanda amahlaya ngabantu abakhuluphele. Ngingumfana omhlophe futhi ngiyathanda ukuzwa ihlaya elikhulu ngabantu abamhlophe. Ngiwahleka wonke amahlaya angalungile kwezepolitiki eSouth Park futhi sengizenzele ambalwa impela. Ngicabanga ukuthi kulungile ukuhleka ngathi inqobo nje uma kunomoya omuhle, hhayi okhohlakele. Ukwehluka kwethu okuhlukile okwenza lo mhlaba ubalabala. Ukuzibona esikhundleni sokuzama ukuzifihla kubalulekile kithi ukuthi sihloniphane.
Ngiyazi ukuthi lokhu kungokuthunyelwe kwefilosofi kakhulu kunalokho okujwayele kepha ngicabanga ukuthi kwehla ngempela 'ekwazini' ngokuqhathanisa 'nokholo' kukho konke esikwenzayo. Ukuba nokholo kubantu kuyisipho esikhulu - kepha kunzima ukusikhuthaza ngoba abantu basiphoxa kaningi. Abaholi abakhulu kuphela kuphela abake baba nalolo hlobo lokholo.
Ukwazi elinye lalawo magama avame ukuziphikisa futhi adinga ama-hubris athile, akunjalo? Sisho izinto ezinjengalezi:
“Ngiyazi ukuthi uzizwa kanjani” - cha, awazi.
"Ngiyazi ukuthi amakhasimende afunani" - sihlala sithola okuhlukile
“Siyazi ukuthi savela” - kodwa asikwazi ngisho nokwelapha umkhuhlane ovamile
“Ngiyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu” - unokholo olungapheli lokuthi uNkulunkulu ukhona. Ngelinye ilanga niyokwazi, noma kunjalo!
NgoLwesihlanu ngineziphuzo nabantu abambalwa. Sixoxe ngazo zonke izinto okufanele sizigweme - kufaka phakathi ezepolitiki nezenkolo. Kwangimangaza ukuthola ukuthi abangane bami abambalwa babengakholelwa kuNkulunkulu. Ngikutholile ngempela lokho okumangazayo. Ngicabanga ukuthi kuthatha okuhle ukholo ukuba ngikholelwa kuNkulunkulu futhi ngilangazelela ukukhuluma nabo kabanzi ngokuthi bafike kanjani esinqumweni sabo nokuthi kungani. Angibabukeli phansi abantu abangakholelwa kuNkulunkulu - ngoba bangabantu, ngikholwa ukuthi kufanele ngibaphathe ngenhlonipho nothando njenganoma ngubani omunye umuntu.
Umhlaba wethu uthanda ukusilanda sibe ngamakholwa nabangewona amakholwa ngaphandle kokubekezelelana nokuhlonipha phakathi. Ukwazi kumnyama futhi kumhlophe, ukholo luthethelela kancane futhi luvumela izinto ezifana nenhlonipho, ukwazisa, nesibindi. Njengoba ngikhula, ukholo lwami luya luqina. Futhi ngaleyo nkolo ukubekezela okukhulu kubantu 'abazi'.
Ngiyethemba ukuthi ngingaqhubeka okholweni lwami futhi ngikwamukele ngokwengeziwe abanye.
QAPHELA: Ngikhohliwe ukukhuluma ngokuthunyelwe okungiqhubele ukubhala okuningi ngalokhu. Ngiyabonga Nathan!
I-Clicky Web Analytics iyakwenza futhi!
Ividiyo: Iphoyinti Elibi
Jul 22, 2007 ngo-2: 17 PM
Hhayi ukukhahlela okunye okuthunyelwe kwakho (kude nakho), kepha lokhu kufanele kube ngcono kakhulu.
Kucatshangwe kahle futhi kuhle. Ngisanda kubloga ngamabhulogi abashumayeli abakhubazekile, futhi uma ama-blog amaningi enjengale… Ngingaba yindoda ejabulayo.
Jul 22, 2007 ngo-2: 30 PM
lokhu okuthunyelwe kungenye yezizathu zokuthi uzohlala unendawo ehlala njalo kumfundi wami wokuphakelayo. isiqiniseko sokuthi kungenzeka kungabi yi-tech noma ukumaketha kepha kwesinye isikhathi akulimazi ukwazisa abantu ukuthi kukhona uhlangothi lomuntu kithi.
Jul 22, 2007 ngo-2: 59 PM
I-Bravo. Ilokho kuphela.
Jul 22, 2007 ngo-8: 27 PM
Ngiyakuthanda ukuba nempikiswano enhle ngokwenkolo. Ngizithatha njengomuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, kepha kube yisilayidi esithandekayo esivela ebuKristwini eminyakeni emihlanu edlule noma ngaphezulu. Ngeke nje ngikudlulise iqiniso lokuthi uma ukholelwa enkolweni eyodwa, uvumela ukuhlupheka kwaphakade komphakathi wonke, kungakhathalekile ukuthi baphila impilo emnandi kangakanani.
Impela ingxoxo enhle, noma kunjalo…
Jul 22, 2007 ngo-10: 37 PM
Akusona neze isono ukuceba. Kepha ngiyakuqonda ukulwa kwakho. Ngenkathi ngisekolishi, ngahamba nohambo lokuya eNdiya lapho sasisebenza khona nezintandane nabanochoko (yebo, basekhona). Nginenkinga yezinyanga ngifika ekhaya ngendlela abantu abachitha ngayo imali engu- $$ ezintweni “eziwubuwula”.
Ngibe sengisebenza esitolo seHallmark ngesikhathi sekhefu likaKhisimusi ngoba ngangidinga ama- $ wezincwadi semester elandelayo. Ngaleso sikhathi, ngabona ukuthi noma izinto ezinjenge-Swarovski crystal zingenanani laphakade - zisanikeza abantu imisebenzi.
Izibaya ezinhle zingahle zibe ngokweqile - kepha kukhona umenzi wepeni umndeni wakhe ojabule ngokuthi unomsebenzi.
Ngicabanga ukuthi ukhiye ngukuthi - noma ngabe unengcebo noma awunayo - ngabe ubeka ithemba lakho kubani? Futhi lokho kukhombisa kanjani ukuthi uyisebenzisa kanjani imali yakho?
Ngokuphathelene namazwana owenzile mayelana namahlaya - bengilokhu ngifunda ngokungahambisani The Humor of Christ. Futhi ukubukeka okuhlukile kweTestamente Elisha. Kepha likhuluma - futhi ngizokuhlaba lokhu - ukuthi amahlaya angasetshenziswa kanjani ukubhekana nesimo somuntu - inqobo nje uma sizimisele ukuzihleka.
Noma kunjalo, ngiyabonga ngokuthunyelwe okuhlukile okuqabulayo!
Jul 23, 2007 ku-8: 08 AM
Umbhalo kanye nomqondo walokhu okuthunyelwe kumnandi. “Izinto okufanele sizigweme” ezihlanganisa izinto yizo kanye izinto okufanele ngabe sikhuluma ngazo, kanye ne-web 2.0 nobuchwepheshe bokumaketha, njll. asiqondi ngokuphelele isenzo sethu.
NjengomKristu (kokubili ngegama nasenkolweni), nginqunyelwe ngaphambili (uma ngingumuntu onezimiso) ukuba ngifinyelele umhlaba wonke ngandlela thile - njengabantu abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, ama-agnostics, njll (uma nabo benemigomo efanayo). Ngakho-ke kubalulekile ukuthi sihlale sifuna ukuqonda nokubuza lezo zinto ezibekiwe kanye nezimiso ezivelayo - ngokuhlanganyela nangokukodwa. Nginovalo lokuthi abangane bami abaningi nozakwethu e-US bayayigwema inkolo nezepolitiki hhayi ngoba izihloko zingabantu uqobo, kepha ngoba thina njengomphakathi sikhohlwe ukubaluleka kanye nokubaluleka kokuqonda izimiso nezimiso (christian, atheist, jewish et al .), futhi esikhundleni salokho bangaxoxa kuphela ngalezi zinto ngohlobo lwangaphandle lweJerry Springer, olukhiqiza kakhulu.
Ngicabanga ukuthi okuthunyelwe ngebhulogi okunje kuyisinyathelo esihle esiqondisweni esifanele.
Qhubeka nomsebenzi omkhulu, mfowethu.
Jul 23, 2007 ngo-9: 18 PM
Okuthunyelwe okuhle. Kumnandi ukuzwa ukuthi kusenabantu abachitha isikhathi esithile bekhuluma ngalokhu. Abantu abaningi abanomqondo ngebhizinisi bacabanga nje ngebhizinisi labo futhi iningi labo lize likhohlwe ngemindeni yabo ..
Jul 23, 2007 ngo-9: 20 PM
Okuthunyelwe okuhle. Kumnandi ukuzwa ukuthi kusenabantu abachitha isikhathi esithile bekhuluma ngalokhu. Abantu abaningi abanomqondo webhizinisi bacabanga nje ngebhizinisi labo futhi iningi labo lize likhohlwe ngemindeni yabo.
Jul 24, 2007 ngo-12: 10 PM
Okokuqala, kungani amakristu ngaso sonke isikhathi kufanele aziveze? Futhi empeleni, kungani noma ngubani edinga ukuzikhomba nganoma iyiphi inkolo?
Ngimane ngiyalizonda igama elithi "ukholo" ngoba nje isenzo sokukholelwa esingenangqondo. Into enhle mayelana "nenkolelo" ukuthi kuqhutshwa ukuqonda kuphela - njengoba ukuqonda kwakho kuguquka, nezinkolelo zakho ziyashintsha. Inselelo yokholo ukuthi kuncane kakhulu indawo yoshintsho (noma ukuvuselelwa!) Futhi imininingwane emisha ephikisana noma ebekela inselelo inkolo inqatshelwa ngokushesha.
Kimi, nginezinkolelo - ngikholelwa izinto ngezinto, futhi zingashintsha ngokuya ngokuqonda. Ngikhululekile ukushintsha ukuqonda kwami, okusho ukuthi nginenketho, futhi ngokukhetha nginomthwalo ngekusasa lami.
Ngibe neposi ngihleli ku 'okusalungiswa' izinyanga ezimbalwa manje, futhi ukumane ngifaka imali yami engu- $ 0.02 lapha kungisizile ukufeza wonke umqondo (manje uma ngingavele ngilungiselele ukubhalwa kwami ​​lapha phansi).
UDoug, lokhu okuthunyelwe okuhle futhi ngiyabonga.
(inothi lobuchwepheshe obuseceleni: noma imiphi imicabango yokuthi kungani kufanele ngikhubaze i-coComment kuFireFox ukuze ngikwazi ukuthumela lapha?)
Jul 24, 2007 ngo-1: 33 PM
Uyabheja. Konke enginethemba lokukwenza ukudala abantu ukuthi bacabange. Yilokho ibhulogi emayelana nakho 🙂